After the election, Crackdown of dissidents | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » After the election, Crackdown of dissidents
After the election, Crackdown of dissidents
Posted by timothy on Nov 10, 2010 in 2010/2012/2015 Election, Myanma News, News, Politics, Issues |4comments
ဒါလဲနှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်းရင်းသားကရင် ညီအကိုများအပေါ်နိုင့်ထက်စီးနင်းလုပ်နေတဲ့စစ်တပ်က ကရင်များကိူသေနပ်တွေနဲ့ချိန်ပြီးမဲအတင်းအဓမ္မထဲ့ခိုင်းရာကစတာဘဲ။ မျိုးချစ်ကရင်တပ်မှူးဗိုလ်နခမ်းမွှေးကတာဝန်အရရောွ
NDF နဲ့ Democratic Party တို့ ရဲ့လ်မ်င်္းလေးအနည်းငယ်ဖွင့်လို့လုံးဝမရတာနဲ့စာရင်ရတာကိုယူပြီးရွေးကောက့်ွဲကိုဝင်ပြိုင်ရတာပါ၊ မဲမပေးကြဘူးဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကသပိတ်မှောက်ကြရင်ကြံ့ဖွတ်ကမဲတွေနိုင်ကုန်တော်မှာဘဲ၊
ဒီလိုတော့ကိ့ယ်မစားရတဲ့အမဲသဲနဲ့ပက်တာတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုပြီး ကြံ့ဖွတ်နဲ့အပြိုင်မဲထဲ့ခိုင်းမဲဆွယ်ခဲ့ကြတက်လေ။ ခုတော့ NDF, Democratic တို့ကြောင့်သံဃာစင်မှောက်တာထက်ဆိုးတဲ့တတိုင်းပြည်လုံး တရုပ်၊ကလား၊ရုရှား၊ Asean တို့ကတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုတဲ့စစ်ဘိနက်အောက်မှာပြားပြားမှောက်တဲ့ဘဝရောက်ရပြီပေါ့။
သန်းရွှေရဲ့ကလိမ်စိငြမ်းဆင်အောက်လမ်းနည်းကမဲရုံမှာလူရှိဘို့၊မဲထဲ့ကြဘို့၊ ဒါဘဲလိုတယ်။ NDF တို့မဲဆွယ်ထားလို့လာထဲ့ကြတာ၊ အဲင်္ဒီနေ့ညနေဘက်ကတော့ငါတို့ပါတီရှေ့ကပြေးနေပြီ။ရွေးကောက်ပွဲတော့နိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့တကယ်လိုလို၊အိပ်မက်လိုလိုဟာ၊
ဘယ်ကရောက်လာမှန်းမသိတဲ့ဖွက်မဲတွေနဲ့၊သန်းရွှေလဲအုံဖွဆိူရော NDF တို့ဟနေတဲ့ပါးစပ်တွေထဲချီးတုံးမတ်တပ်ထပြီးဝင်ကုန်လို့၊
ဒါ့ကြောင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲပြည်သူလူထုရှုံးရတာဟာ NDF, Democratic party တို့မိုက်မဲမှုလို့ဘဲသင်ခန်းစာယူရမှာဘဲ။
ကျုုပ်ထင်တာတော့ .. ဒီအချိန်မှာ အရေးအကြီးဆုံးက..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နို်င်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အားလုံးလွတ်မြောက်ရေးပဲ..။
အဲဒါက … အဖြေတွေအားလုံးကိုသယ်ဆောင်ပေးလာကြမှာပါ..။
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန် ့အမြန်ထုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုကြရမယ်ထင်ပါတယ်..။
တောင်းဆိုတော့လဲ ဘယ်သူ့ဆီတောင်းဆိုကြမလဲ။အဲဒါလဲရှိတယ်။ တရုပ်ကြီးလဲကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆုဒီနှစ်မှ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးရထားတဲ့အန်တီစုလို ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တဦး ဖမ်းဆီးစောင့်ရှောက်ထားရတော့ ဘဝပေးကုသိုလ်ချင်းတူညီတဲ့ သန်းသန်းရွှေရွှေလေးနဲ့၂ဆ၃ဆပိုတိုးပြီးကိုင်းကျွန်းမှီ၊ကျွန်းကိုင်းမှီဆိုသလို ဘဝတူချင်းပိုနီးစပ်ဘို့အကြောင်းဖန်လာတာဘဲ။ အန်တီစုကချွင်းချက်မရှိ၊အကန့်အသတ်မရှိလွတ်လပ်စွာသွားလာပြောဆိုတဲ့ အာမခံချက်ရမှအချုပ်အနှောင်ကလွှတ်တာကိုလက်ခံနိူင်မယ်တဲ့။
တရုပ်ကြီးထောက်ချမှုကိုအပြည့်အဝ ခံစားရတဲ့သန်းသန်းရွှေလေးကတော့အမေရိကန်၊အင်းဂလိပ်၊ ကုလသမဂ်ဂ၊တပ်နိုင်ရင်သကြားမင်းကြီးဆင်းလာပြီးပြောပြော နားမထောင်၊လျစ်လျူရှုမှာဘဲ။ ရွေးကောက်ပွဲအတုကိုအားလုံးသူနိုင်ဘို့ စိတ်ချရပြီဆိုတော့မှကျင်းပပေးသလိုဘဲ သန်းသန်းရွှေလေးကသူပိုင်မှ ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်တက်ပြီးအန်တီစုကိုသဘောထားကြီးမြတ်တော်မူသော ရေမြေ့အရှင်သ္ခင်ကသဘောထားကြီးစွာဖြင့် အချုပ်အနှောင်မှလွှတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးပဏာယူလိမ္မယ်။
ဒါ့ကြောင့်လဲရွေးကောက်ပွဲကရတောင့်ရခဲ မဲမထဲ့နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ စစ်ကောင်တွေကိုအပြီးအပြတ် သုတ်သင်ရှင်းလင်းခဲ့ဘို့ပြောဆိုခဲ့ကြတာဘဲ။ နောက်တခါကြမှဒီကိစ္စကိုမဲရုံမှာ လူလုံးဝပြောင်သလင်းခါနည်းနဲ့လုပ်ကြမယ်။ ဒီတခါတော့ရှုံးပြီးတာပြီးပေ့စေတော့။ နောက်တခါ၊နောက်တခါ။
Jakarta: US President Barack Obama on Tuesday criticized the recent elections in Myanmar, saying they had been neither free nor fair.
He also called on the country’s ruling generals to immediately and unconditionally release all political prisoners. ….
အိုဘားမားတောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြိးများဆီကို တောင်းဆိုနေပါတယ်ဆိုမှတော့ ..။
တရုတ်ကို စစ်တပ်က .. သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ရောင်းပေးတယ်..။ ( http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Burma_pipelines )
အိန္ဒိယကို သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ရောင်းပေးတယ်..။ ( http://www.gasandoil.com/goc/news/nts101517.htm)
ရောင်းရငွေတွေနဲ့ ရုရှားဆီက နေ လေယဉ်၊ဒုံးကျည်၊ စစ်ပစ္စည်း၊ ညူစက်ရုံတွေဝယ်ပေးတယ်..။ ကျောင်းသားပညာတော်သင်တွေ ပို ့ပေးတယ်..။ (ကျောင်းစရိတ်ငွေ မီလီယံချီပေးတယ်..)
ဒေါ်လာငွေ တရားဝင် လွှဲပို ့လည်ပါတ်ခွင့်မရလို့ .. စင်္ကာပူဘဏ်၊ ဒူဘိုင်းဘဏ်တွေကို မြိုးမြိုးမျက်မျက်ပေးစားပြီး ခု်င်းတယ်..။
ကိုရီးယား တွေကို ရေနံတူးစက်ပစ္စည်း၊ ငွေကြေးရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတွေပေးတယ်..။
အခု ..ယိုးဒယားစစ်တပ်ကို ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းလုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပြန်ပြီ..။
ဒါတွေက သတင်းတွေမှာပြတဲ့ .. လုပ်နေဖြစ်နေတဲ့အချက်အလက်တွေပဲ..။
မလိမ်တဲ့ အချက်အလက်တွေမူတည်ပြီး … ဘာဖြစ်သင့်တယ်..။ ဘာလုပ်ရင်ဖြစ်မယ်.. ဝိုင်းစဉ်းစားကြရင်ကောင်းမယ်ထင်တာပါပဲ..။
ဖြစ်ချင်တာတွေ ရေးကြရင်တော့ ..
ဒေါ်စုကိုချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးပေးကိုစစ်အစိုးရကလိုက်လျောနိုင်မလား။ မထင်…။ သူ့ကိုအချိန်မရွေးပြန်ကုပ်နိုင်တာတိုင်းသိပြည်သိကမ္ဘာသိ..။ ခုချိန်ဆိုပိုလို့တောင်လုပ်နိုင်သေးတယ်။ တရားဝင်လုပြီကိုး။ ရက်(၉၀)ဘဲစောင့်ရမယ်…တရုတ်၊ဆိုဗီယက်နဲ့မြောက်ကိုရီးရားအပါအဝင် Asean ကအသိအမှတ်ပြုဝမ်းမြောက်ကြောင်းတွေလှိမ့်ဝင်လာတော့မယ်။ အတိုက်အခံကနေအရွေးခံရတဲ့အမတ်တွေလဲ တလနှစ်လလောက်တော့လူပြောကောင်းအောင်လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်တို့ဘာတို့အသံကောင်းဟစ်ကြမယ်။ နောက်(၂)လ(၃)လလောက်ဆိုပါးစပ်တွေပိတ်သွားကြမှာဧကန်မုချပါဘဲ။
(၈၈)အရေးအခင်းတုံးကနယ်တွေမှာ၊သပိတ်အဖွဲ့တွေဖျာလုကြတာတွေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်လုကြတာတွေမမြင်ချင်အဆုံးပါ။ အဓိကကဦးဆောင်တဲ့နမူနာပြကောင်းခေါင်းဆောင်မရှိခဲ့ဘူးလေ..။ ရှိတဲ့အချိန်လဲကျရောစစ်တပ်ကအာဏာယူလိုက်ပြီဘဲ။